Adeegii internet-ka ee koonfurta Soomaaliya oo dib loo soo celiyay - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu soo laabtay adeegii internet-ka ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay kadib dadaal waajir ah oo ay sameeyeen wasaaraddiisa iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee maamulaysay internet-ka xawaarihiisa sareeyo ee Fiber Optic lagu guuleystay in dib loo xiro waayaradii internet-ka ee gunta hoose ee badda yaalay, kuwaas oo uu jiiray markab sedex todobaad ka hor.
Muddada sedexda todobaad ee uu maqnaa internet-ku, waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qeybaha kala duwan, sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, iyo adeegyada dawladda.
Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Eng Canshuur, waxa uu sheegay in dawladda guddi u saartay qiimeynta inta uu la egyahay khasaaraha uu keenay intii internet-ku maqnaa gobollada konfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaana ay soo bandhigi doonaan. Wasiirka ayaa bixiyay tilmaamo ay tahay in la sameeyo si looga baaqsado in dhibaatadani ay markale soo laabato.
Image caption Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa xaqiijiyay dib u soo noqoshada adeegii internet-ka
Tilmaamahaas waxa kamid ah in la meel mariyo sharciga isgaarsiinta qaranka, oo dadweynaha damaanad buuxda u siinaya haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii heshiiska ay kula galeen awood ah inay magdhaw weydiistaan, iyo in shirakaduhu la yimaadaan qaab looga ilaalin karo maraakiibtu inay jiiraan xargaha badda hoosteeda yaala, iyo in shirkadaha internet-ka ka shaqeeya ay la yimaadaan khad kale oo keyd ah (Backup) iyo ganacsatada lagu dhiirigaliyo in fursado ganacsi ay ka bannaan yihiin baahida sii kordhaysa ee bulshadu u qabtay internet xawaare sare leh.
Muddadii sedexda todobaad ahaa ee internet-ku ka maqnaa gobolada koonfurta iyo bartamaha waxa istaagay adeegyo ay bixin jireen hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay taasoo saameysay nolosha malaayiin qof oo Soomaali ah.